၂၀၂၀ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှား | သတင်းအချက်အလက်စိစစ်မှု
WASHINGTON, DC - DECEMBER 03: President Donald Trump speaks about the election after presenting the Medal of Freedom to former college football coach Lou Holtz in the Oval Office of the White House on December 3, 2020 in Washington, DC. Holtz is best known for his time as head coach of University of Notre Dame's football team, winninganational championship in the 1988 season. Doug Mills-Pool/Getty Images/AFP (AFP / Pool)
၂၀၂၀ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှား
AFP မြန်မာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြသည့်နေ့စွဲ သောကြာ4ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2020 အချိန် 09:41
၂၀၂၀ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပြီး အနိုင်ရရှိသွားပြီလို့ဆိုထားတဲ့ပို့စ်တွေကို Facebook ပေါ်မှာ အကြိမ်ရေရာနဲ့ချီ ပြန်လည်မျှဝေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအဆိုဟာ မှားနေတာပါ။ ၂၀၂၀ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ ဂျိုးဘိုင်ဒင်ဟာ လက်ရှိသမ္မတဒေါ်နယ်လ်ထရမ့်ကို အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်အထိသတင်းတွေအရ မဲပေးပွဲမှာမသမာမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီး ထရမ့်ရဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေအားလုံးဟာ ပြည်နယ်အချို့မှာ ပယ်ချခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ မဲမသမာမှုတွေကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေအထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံမတွေ့ရဘူးလို့လည်း တာဝန်ရှိသူတွေက ဆိုပါတယ်။ နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ပို့စ်တွေမှာ YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခုရဲ့ screenshot တွေပါဝင်ပြီး ဒီဗီဒီယိုကိုတင်တဲ့မီဒီယာကလည်း လူသိများတဲ့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။
နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ပို့စ်မှာ screenshot ပုံရိပ် ၅ ခုပါဝင်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တုန်းက Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ တင်ထားတာပါ။ အဲဒီပို့စ်ကို ပြန်လည်မျှဝေတဲ့အကြိမ်ရေ ၂၁၆ ကြိမ် ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပို့စ်ပါစာသားအချို့ကတော့ အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ “ဒုံး. ဒုံး.ဒုံး.ထရမ့်ကြီးပြန်လာပြီကွ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလက ကျင်းပခဲ့တဲ့ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ ဂျိုးဘိုင်ဒင်က လက်ရှိသမ္မတဒေါ်နယ်လ်ထရမ့်ကို အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။ ဘိုင်ဒင်ဟာ ပြည်နယ်အလိုက်မဲတွေမှာ ၃၀၆ မဲ-၂၃၂ မဲနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တွက်တဲ့ (popular national vote) မှာလည်း ဘိုင်ဒင်က ၅၁-၄၇ နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုရလဒ်တွေ ထွက်ခဲ့ပေမယ့် ထရမ့်ကတော့ ရလဒ်တွေကို လက်မခံဘဲ ငြင်းဆိုထားပါတယ်။ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း AFP သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဒီလင့်ခ်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ the General Services Administration (GSA) က ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ဘိုင်ဒင်ကို ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိသူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ CNN သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဒီလင့်ခ်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
တူညီတဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့ အလားတူပို့စ်တစ်ခုကို screenshot ပုံရိပ် နှစ်ခုနဲ့အတူ Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ တင်ထားပါသေးတယ်။
ပထမ Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်ကပဲ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ထရမ့်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အလားတူပို့စ်တစ်ခုကို နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီအဆိုဟာ မှားယွင်းနေပြီး ၂၀၂၀ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘိုင်ဒင် အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Screenshot တွေမှာ ထရမ့်၊ Facebook CEO မာ့ဇူကာဘတ်၊ အမေရိကန်မဲရုံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ထရမ့်ကိုထောက်ခံသူတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကို တွေ့ရပါတယ်။ Facebook မှာ အဓိကကျတဲ့စကားလုံးတွေသုံးပြီးရှာကြည့်တဲ့အခါ အဲဒီ screenshot တွေအားလုံးဟာ “US Military News” လို့အမည်ရတဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခုကနေယူထားတာတွေ့ရပါတယ်။
၃ မိနစ်နဲ့ စက္ကန့် ၂၀ ကြာမြင့်တဲ့အဲဒီဗီဒီယိုကို US Military News ဆိုတဲ့ Facebook page ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
US Military News ဟာ အကောင့်စဖွင့်တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလကနေစလို့ လက်ရှိအချိန်အထိ YouTube မှာ ကြည့်ရှုသူ ၅ သန်းကျော်ရရှိထားတဲ့ ချန်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူသိများတဲ့ မီဒီယာတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ဒီချန်နယ်ကို YouTube ကလည်းလက်ရှိအချိန်အထိ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတာမျိုးမရှိသေးတဲ့အကြောင်း ဒီလင့်ခ်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
US Military News ရဲ့ဗီဒီယိုမှာ ထရမ့်အနိုင်ရတယ်လို့ တိတိကျကျမပြောထားပေမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ထရမ့်စိန်ခေါ်အံတုနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါသတင်းတွေကို တောက်လျှောက်တင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့အထိ ထရမ့်ရဲ့ တရားစွဲဆိုမှုတွေဟာ အောင်မြင်မှုမရှိသေးဘဲ ရွေးကောက်ပွဲမသမာမှုတွေရှိတဲ့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေအားလုံးကိုလည်း တာဝန်ရှိသူတွေက ပယ်ချထားတာပါ။ ဒီအကြောင်း AFP သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဒီလင့်ခ်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုမှာ Facebook CEO မာ့ခ်ဇူကာဘတ်က ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲရုံးတွေကို ကိုဗစ်ကာလမှာ ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ လှူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဗြိတိန်သတင်းဌာန The Independent ရဲ့သတင်းကို ကိုးကားပြီး ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ပယ်ဖျက်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ ဇူကာဘတ်ရဲ့လှူဒါန်းမှုကိုလည်း ထရမ့်က စိန်ခေါ်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ အဲဒီဗီဒီယိုမှာ ခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။
ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲရုံးတွေကို ဒေါ်လာ သန်း ၂၅၀ လှူခဲ့တယ်လို့ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ ဇူကာဘတ်က Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်ကနေ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့အလှူငွေကို ထပ်တိုးလိုက်တဲ့အတွက် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာသန်း ၄၀၀ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့အထိ ဇူကာဘတ်ကို ဘယ်ပြစ်မှုနဲ့မှ တရားစွဲဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူး။